February | 2012 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Posted on February 21, 2012 by chitnge
ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ်တရားနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရား ဆိုသည်မှာ အကြောင်းအကျိုး တရားပင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းခံလျှင် အကျိုးရသည်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ သစ္စာလေးပါးသည်လည်း အကြောင်းအကျိုးပင် ဖြစ်သည်။ သမုဒယ အကြောင်းခံလျှင် ဒုက္ခ အကျိုးပေးသည်။ မဂ္ဂအကြောင်းခံလျှင် နိရောဓ အကျိုးပေးသည်၊ အကြောင်းအကျိုး ဝါဒပင် ဖြစ်သည်။ အကြောင်းအကျိုးဝါဒကို ယေဘုယျအားဖြင့် ကြည့်လျှင် အကြောင်းခံသောအခါ အကျိုးဖြစ်ရသည် ဖြစ်၍ အကြောင်းကို သတ်လျှင် အကျိုးချုပ်ဆုံးသွားရသည်။ ဤကား No tags for this post.
ဖအေတူသမီးဟုရည်ညွှန်းလိုသည် .. ..
ဖအေတူသမီးဟုရည်ညွှန်းလိုသည် .. .. စာရေးသူသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား လွန်စွာလေးစားသည် ဤသို့လေးစားရခြင်းမှာ အကြောင်းရှိသည်။ အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဆိုသော် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် အကြောင်းအကျိုးဆိုင်ရာအမြင် နက်ရှိုင်း ရှင်သန်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အကြောင်းအကျိုး အမြင်သည် မှန်ကန်သော အမြင်ပင်ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်း လက်ခံသည်၊ သိပ္ပံပညာရှင်များကလည်း လက်ခံသည်၊ ဒဿနပညာရှင်များကလည်း လက်ခံသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၌ အကြောင်းအကျိုး ဝါဒသည် ဗုဒ္ဓဝါဒပင်ဖြစ်ကြောင်း အစဉ်အလာ အဆုံးအမ ရှိသည်။ “ယေဓမ္မာ ဟေတုပ္ပဘဝါ” ဟူသော စကားက အထောက်အထား ဖော်ပြလျှက်ရှိသည်။ Off things that … Continue reading →
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဘာ့ကြောင့် အာဇာနည် ဖြစ်ရသနည်း?
Posted on February 19, 2012 by chitnge
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဘာ့ကြောင့် အာဇာနည် ဖြစ်ရသနည်း? ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် အာဇာနည် ဖြစ်လေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အတ္တကိုယ်ကျိုးကို မငဲ့ကွက်ဘဲ အများအကျိုးကို စွမ်းဆောင်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ထက်ပို၍ အတ္တကိုယ်ကျိုးကို မငဲ့ကာ အများအကျိုးအတွက် စွမ်းဆောင်ရပါသည်။ ထိုသို့ စွမ်းဆောင်ရသဖြင့် မိမိဘဝမှာ နစ်နာသွားပါပြီ။ နစ်နာသဖြင့် မိမိအား ဝိုင်း၍ ကယ်ကြပါဦး စသောသဘော တောင်းခံခြင်းမျိုး လုံးဝမပြုမူ၍ တိုင်းပြည် လူမျိုး ဘာသာ သာသနာ အကျိုးကို စွမ်းဆောင်ခြင်း သက်သက်သာလျှင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Intrinsic … Continue reading →
Posted on February 18, 2012 by chitnge
မြတ်စွာဘုရား၏ဝါဒသည်အကြောင်းအကျိုးဝါဒ မြတ်စွာဘုရား၏ဝါဒသည် အကြောင်းအကျိုးဝါဒဖြစ်သည် .. .. “ယေဓမ္မာ ဟေတုပ္ပဘဝါ” ဟူသော စကားသည် ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ အဓ်ိပ္ပာယ်မှာ – အကြင်ဖြစ်ရပ်၌ အကြောင်းရှိသည် – ဟူသော သဘောပင် ဖြစ်သည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ ဝါဒကို အကြောင်းအကျိုးဝါဒဟု သရုပ်ဖေါ်ရသည်။ အကြောင်းခံလျှင် အကျိုးဖြစ်မည်။ ကောင်းကြောင်း ခံလျှင် ကောင်းကျိုးဖြစ်မည်။ ဆိုးကြောင်းခံလျှင် ဆိုးကျိုးဖြစ်မည်။ သို့သော် ချိန်ဆရသော အခြေအနေများနှင့် ကြုံရတတ်သည်။ ကောင်းကြောင်း ခံပြီးပြီးချင်း ကောင်းကျိုးဖြစ်ရမည်ဟူ၍တော့ တသမတ်တည်း မျှော်လင့်၍တော့ မရချေ။ အချိန်အခါ … Continue reading →
Posted on February 16, 2012 by chitnge
တရားတော်သည် အရာရာကို ကျေးဇူးပြုတော်မူသည် ဟောပြောပွဲအခမ်းအနား IBC – 16.02.2012 No tags for this post.
အဘယ့်ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဖြစ်ရသနည်း ???
Posted on February 15, 2012 by chitnge
အဘယ့်ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဖြစ်ရသနည်း ??? ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် အတ္တဒိဋ္ဌိ နည်းသောကြောင့်၊ အကြောင်းအကျိုးပညာ ရှိသောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဖြစ်ရသည် .. .. ငါသူ ပုဂ္ဂလိက အတ္တမယူ အကြောင်းအကျိုးအမြင်ကို အခြေခံယူသောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဖြစ်ရသည် .. .. တိုင်းသူ ပြည်သားများအား အမှန်တကယ် စေတနာရှိသောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဖြစ်ရသည် .. .. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် တိုင်းသူပြည်သားများအား တိုးတက်ကြီးပွား ချမ်းသာကြွယ်ဝစေရန် အမှန်တကယ် လက်တွေ့လမ်းညွှန် တိုက်တွန်းနိုင်သောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဖြစ်ရသည် … Continue reading →
Posted on February 8, 2012 by chitnge
Live@IBC တရားနာ ပရိသတ်များ No tags for this post.
Live@IBC တရားအားထုတ်နေသော သီလရှင် ဆရာကြီး No tags for this post.
Live@IBC တရားနာပရိသတ်များ No tags for this post.